सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने को को ? थाहा पाइराखौं | mulkhabar.com
सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने को को ? थाहा पाइराखौं
December 5, 2017 | 7:34 am 255 Hits
पार्टीको केन्द्रीय राजनीति त्याग गर्दै मुख्यमन्त्री बन्ने लोभमा केही नेता प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएका छन् । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदसमेत भइसकेका र केन्द्रीय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ती नेताहरू आफूलाई मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित मत मागिरहेका छन् । प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका नेताहरू अब केन्द्रीय राजनीति नभई प्रदेशकै राजनीतिको नेतृत्व गर्नेगरी प्रदेशतर्फ फर्केका हुन् । आजको राजधानीमा खबर छ-सर्वसाधारण जनताका बीचमा पुगिरहेका उनीहरूले आफू प्रदेशसभाका उम्मेदवार मात्रै नभई भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत रहेको दाबी गर्दै आफैंलाई मतदान गरी विजयी बनाउन आग्रह गरिरहेका छन् ।
यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले मुख्यमन्त्रीको आधिकारिक निर्णय गरेका छैन। निर्वाचनपछि पार्टीको हैसियत एवं अन्य पार्टीसँग हुने तालमेलका आधारमा प्रदेश सरकार निर्माण हुने भएकाले निर्वाचनबाट आउने परिणामपछि नै मुख्यमन्त्रीको निर्णय गरिने नेताहरू बताउँछन् ।
एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बन्नेको होडबाजी नै छ। कांग्रेसभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार वाम गठबन्धनबाट बढी छन्। सर्वसाधारणसँग मत माग्दै प्रचारप्रसारमा रहेका उनीहरूले आफू भावी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार रहेकाले आफ्नो पक्षमा मतदान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री तथा दुईपटक सांसद भइसकेका एमालेका सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन्। मुख्यमन्त्री बन्नैका लागि उनी सुनसरी–२ को प्रदेशसभा (ख) बाट उम्मेदवार छन् ।
प्रदेश १ मा आचार्यसँग भोजपुर–१९ख० बाट प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश १ का उपप्रमुख शेरधन राईले पनि भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। उनको क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता टंक आम्बुहाङले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै मत मागे। उनको क्षेत्र ताप्लेजुङ १ (ख) मा निर्वाचन भइसकेको छ ।
प्रदेश १ मा वाम गठबन्धनको प्रदेशसभातर्फ बहुमत आउने पूर्वअनुमानका साथ यहाँ मुख्यमन्त्रीका दाबेदारको संख्या बढी भएको छ ।
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्रीको दौडमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट तीन जना नेता छन्। एमाले स्थायी कमिटीका सदस्य एवं प्रदेश २ का संयोजक सत्यनारायण मण्डल, पोलिटब्युरो सदस्य एवं प्रदेश २ का सहसंयोजक नागेन्द्र चौधरी, माओवादी केन्द्रका नेता भरत साह वाम गठबन्धनबाट भावी मुख्यमन्त्रीका दाबेदारका छन् ।
प्रदेश २ मा कांग्रेसको तर्फबाट पूर्वराष्ट्रपतिका छोरासमेत रहेका नेता डा चन्द्रमोहन यादव र प्रेमकिशोरप्रसाद साहले मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित चुनावी प्रचारप्रसारमा छन् ।
यादव धनुषा ४ (क) र साह धनुषा १ (क) बाट प्रदेशसभाका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । राजपा नेपाल र फोरम नेपालको मधेसवादी गठबन्धनले बहुमत ल्याए आफ्नै नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
आफ्नो बहुमत आउने पूर्वअनुमानका गर्दै मधेसवादी गठबन्धनबाट भावी मुख्यमन्त्रीका लागि दाबेदार अन्य पार्टीभन्दा बढी छन् ।
मधेसवादी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीमा राजपा नेपालबाट राजकुमार लेखी, मनीष सुमन, परमेश्वर साह, सुरिता साह, रानी तिवारी, उपेन्द्र महतो र जितेन्द्रप्रसाद सोनारको छ ।
लेखी सप्तरी–१ (क), सुमन सप्तरी–२ (ख), साह धनुषा–३ (ख), सुरिता महोतरी–२ (ख), तिवारी महोत्तरी–३ (ख), महतो सर्लाही–१ (क) र सोनार बारा–४ (ख) बाट प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसैगरी फोरम नेपालबाट पार्टीका उपाध्यक्ष लालबाबु राउतका साथै पारसप्रसाद साह, शैलेन्द्र साह पनि भावी मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । राउत पर्सा–१ (ख), पारस बारा–३ (ख) र शैलेन्द्र सप्तरी–२ (क) बाट उम्मेदवार छन् ।
प्रदेश ३ मा एमाले उपाध्यक्ष एवं प्रदेश ३ की संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्य, पोलिटब्युरो सदस्यत्रय राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, पशुपति चौलागाईं, माओवादी केन्द्रबाट शालिकराम जमरकट्टेल र कांग्रेसबाट इन्द्र बानियाँले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ प्रतिस्पर्धामा छन् । पार्टीको प्रदेश प्रमुख, पूर्ववनमन्त्री एवं पूर्वसांसद रहेका किरणले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भन्दै पार्टीमा लबिङसमेत थालेका छन् ।
पूर्वपर्यटनमन्त्री एवं पूर्वसांसद पृथ्वीसुब्बाले आफू पार्टीको सचिव एवं संगठन विभाग प्रमुखसमेत भएकाले आफू नै भावी मुख्यमन्त्री बन्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । किरण तनहुँ–२ (ख) र पृथ्वीसुब्बा लमजुङ–१ (ख) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार छन्। दुवैको क्षेत्रमा निर्वाचन भइसकेको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश ४, ५ र ७ मा कसैले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छैनन् । कांग्रेसबाट प्रदेश ४ मा ध्रुव वाग्लेले दाबी गरेका छन् । तनहुँ–२ (ख) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार वाग्ले तनहुँका पूर्वपार्टी सभापति र पूर्वसांसदसमेत हुन् ।
प्रदेश ५ मा वाम गठबन्धनबाट भावी मुख्यमन्त्रीका एक मात्र उम्मेदवारका रूपमा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल छन्। एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले भावी मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएपछि उनी दाङ–२ (क) बाट उम्मेदवार छन् ।
प्रदेश ५ मा भावी मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट अहिलेसम्म खुलेर कसैले दाबी गरेका छैनन् । यसैगरी प्रदेश ६ मा एमाले पोलिटब्युरो सदस्यद्वय यमलाल कँडेल र प्रकाश ज्वालाको दाबी छ ।
माओवादीबाट प्रदेश ६ को भावी मुख्यमन्त्रीका लागि महेन्द्रबहादुर शाही र नरेश भण्डारी दाबीमा छन् ।
प्रदेश ६ मै कांग्रेसबाट भावी मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्ने पूर्वपर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही छन्। सुदूरपश्चिमको प्रदेश ७ मा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको मुख्य दाबेदारका रूपमा कर्णबहादुर थापा छन् ।
पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वउद्योगमन्त्री रहेका थापा समानुपातिकतर्फको प्रदेशसभा उम्मेदवार छन् । यसैगरी कांग्रेसबाट बहादुरसिंह थापाले भावी मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन् । कञ्चनपुर २ (ख) बाट उम्मेदवार बनेका थापा पूर्वसांसद हुन् ।